Cameroon - Xakamaynta Daacuunka: Saddexda cudur ee cusub ee laga helay gobolka Waqooyi. - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » CAAFIMAADKA CUSUB »Cameroon - La dagaallanka Daacuunka: Saddex cusub oo laga helay gobolka Waqooyi.
Wakiilka gobolka waqooyi-galbeed ee caafimaadka ayaa lagu sheegay bayaan ay soo saareen soo saarka cudurka daacuunka ee horay ugu geeriyooday labo, ka dib afar bilood oo kali ah.
Gobollada waqooyiga mar kale waxay ka jirtaa cudurka daacuunka ee daacuunka. War saxaafadeed, wakiilka gobalka ee Caafimaadka Dadweynaha ee Waqooyi, Dr. Caro Saidou, ayaa xaqiijiyay dib u soo noqoshada cudurrada faafa, ka dib markii ku dhawaad ​​afar bilood oo qafiif ah. Saddex guri ayaa hadda ka walaacsan, oo ay ku jiraan degmooyinka caafimaadka ee Pitoa iyo Garoua 1er.
A dhowr maalmood ka hor la sii daayo ergada gobolka Caafimaadka Northern ah, nin bilays ah ayaa ku dhintay isbitaal ku yaala millaterigu Garoua 1er April, kaliya dhowr daqiiqo ka dib markii uu hayo. dhimashada lahaa oo dhan calaamadaha xaaladaha daacuunka, kordhin buugga of 19 kale xaaladaha looga shakiyo sheegay tan iyo March 27 ah, keeno labo tirada dhimashada tan la ruxruxo cusub. Xaaladda A ayaa sababay argagax gobolka in uu horey u soo gaaray fooli of this cudurka shubanka ba'an ay keento qofku cuno cunto ku wasakheysan ama biyo jeermiska Vibrio cholerae.
Sida laga soo xigtay Ergay ka, nidaamka jawaabta qotomiyey by adeegyada baahsan oo booqdey ah, iyadoo la kaashanaysa la-hawlgalayaasheeda ay ayaa ku xoogaystay, inkasta oo ay wali adag tahay in la ogaado si hufan arrimaha ay tahay fadilay soo laabashada safmarka ah ee xilligan xilliga cimilada. Xoogaa waxaa lagu meeleeyaa wacyigelinta bulshada, dhiirrigelinta nadaafadda iyo fayadhowrka iyada oo loo marayo qaybinta agabyada caafimaadka ee degaanka caafimaadka, jeermisyada nidaamsan ee dhammaan goobaha lala xiriirayo bukaannada looga shakisan yahay, iyo kuwo kale
Ergada ayaa sidoo kale ku amartay dadweynaha inay ixtiraamaan xeerarka nadaafadda iyo in qof kasta oo qaba astaamaha looga shakisan yahay sida ugu dhakhsaha badan u gaarsiiyo rugta caafimaadka ee kuugu dhow. Daacuunka cusub ee daacuunka ayaa ka dillaacay May 2018 ee gobalka Waqooyi. Sida laga soo xigtay warbixintii ugu dambaysay laga xaaladda daacuunka ka dillaacay maamulka Cameroon, la daabacay on January 7 2019, Wasaaradda Caafimaadka (booqdey), 4 tobanka gobol oo Cameroon ay saameeyeen ka dillaacay ugu dambeeyay. khasaare 82 ayaa la xaqiijiyay in, ay ka mid yihiin 69 woqooyi, kaas oo ku haynaysa gobolka ugu saameeyeen, 5 Waqooyiga Fog, heestayaal iyo 4 4 Xarunta. Dhimashada 58 ayaa la duubay tan iyo bilowgii infekshanka, iyada oo dhimashada 40 ee gobolka Waqooyiga, 17 ee Waqooyiga Faro iyo 01 ee Xarunta. Heerka dhimashada kiisaska heer qaran waa 5,8% 6,3% Waqooyiga sida ku cad warbixintan ugu dambeysa.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://actucameroun.com/2019/04/09/cameroun-lutte-contre-le-cholera-trois-nouveaux-foyers-detectes-dans-la-region-du-nord/